Izizathu ezili-10 zeSiza sakho siphulukana neLiteic Organic ... Kwaye kufuneka wenze ntoni | Martech Zone
Zininzi izizathu zokuba iwebhusayithi yakho ilahlekelwe kukubonakala kwayo kokukhangela kwezinto eziphilayo.
Ukufudukela kwisizinda esitsha Ngelixa uGoogle ebonelela ngeendlela zokubazisa ukuba ufudukele kwisizinda esitsha ngokuKhangela iConsole, usekho umba wokuqinisekisa ukuba yonke i-backlink ngaphandle apho isombulula kwi-URL elungileyo kwindawo yakho entsha kunokuba ingafunyanwa (404) iphepha .
Iimvume zesalathiso -Ndibonile iimeko ezininzi zabantu abafaka imixholo emitsha, iiplagi, okanye ukwenza olunye utshintsho lwe-CMS olutshintsha ngokungalunganga useto lwabo kwaye babhlise indawo yabo ukuba ingarhubuluzi ngokupheleleyo.
Imethadatha engalunganga -Iinjini yokukhangela zithanda imethadatha enjengezihloko kunye neenkcazo zephepha. Ndihlala ndifumana imicimbi apho iithegi zetayitile, i-meta tag tag, iinkcazo zingahlali kakuhle kwaye injini yokukhangela ibona amaphepha angafunekiyo… ke zikhomba ezinye zazo.
Ukuphendula ngeselula Iselfowuni ilawula uninzi lwezicelo zokukhangela izinto eziphilayo, ngenxa yoko indawo engakhange ilungiselelwe inakho ukubandezeleka. Ukongeza amandla e-AMP kwindawo yakho kunokubuphucula kakhulu ubuchule bakho bokufumaneka kukhangelo lweselfowuni. Iinjini zokukhangela zikwalungelelanisa inkcazo yokuphendula kweselfowuni njengokukhangela okuthe gabalala.
Guqula kubume bephepha -Izinto ezikwiphepha le-SEO zisezingeni elifanelekileyo ngokubaluleka kwazo - ukusuka kwizihloko ukuya kwizihloko, ukuya kwisibindi / kugxininisa, kwimithombo yeendaba nakwizitayile ze-alt… ukuba utshintsha ubume bephepha lakho kwaye uhlengahlengise okuphambili kwezinto, ziya kutshintsha umxholo wakho kwaye ungaphulukana nenqanaba lelo phepha. Iinjini yokukhangela zinokuguqula ukubaluleka kwezinto zephepha.
Guqula ukuthandwa Ngamanye amaxesha, indawo enetoni yegunya lesizinda iyekile ukunxibelelana nawe kuba bayivuselela indawo yabo kwaye bayilahla inqaku elimalunga nawe. Ngaba ukhe waphicotha ukuba ngubani okwinqanaba lakho kwaye ubone naluphi na utshintsho?
Ukwanda kukhuphiswano -Abakhuphiswano bakho banokwenza iindaba kwaye bafumane itoni yee-backlinks eziqhuba isikhundla sabo. Akukho nto unokuyenza malunga noku de kube kugqityiwe okanye ukuba unyusa umgangatho wokukhuthaza umxholo wakho.
Iimpawu eziphambili zegama -Ukukhangele kuGoogle ukujonga ukuba ukhangela njani ukuba izihloko zihamba njani? Okanye isigama esisiso? Umzekelo, ukuba iwebhusayithi yam yathetha ngayo smartphones ngalo lonke ixesha, ndinokufuna ukuvuselela elo xesha kuye inombolo kanomyayi Kuba lelona gama lisetyenziswayo kule mihla. Ndifuna ukujonga imeko zonyaka apha kunye nokuqinisekisa isicwangciso sam somxholo siqhubeka ngaphambi kwendlela yokukhangela.
Ukuzikhusela -Ungamangaliswa ukuba mangaphi amaxesha amaphepha akho akhuphisana nawo kwiinjini zokukhangela. Ukuba uzama ukubhala iposti yebhlog inyanga nenyanga ngesihloko esinye, ngoku usasaza igunya lakho kunye ne-backlinks kumaphepha ali-12 ngokuphela konyaka. Qiniseka ukuba uyaphanda, uyile, kwaye ubhale iphepha elinye kugxilwe kwisihloko ngasinye-kwaye ugcine elo phepha lihlaziywa. Sithathe iziza ezantsi ukusuka kumawakawaka amaphepha ukuya kumakhulu amaphepha-ukuqondisa abaphulaphuli ngokufanelekileyo-kwaye babukela ukugcwala kwabo okuphilayo kabini.
Lumkela iZibonelelo zakho zeOrganic
Inani labantu endinalo elicela uncedo lwam koku liyothusa. Ukwenza ukuba ibe mandundu, bahlala bekhomba eqongeni okanye iarhente ye-SEO kwaye besokola nenyaniso yokuba ezo zibonelelo azikhange ziwuqikelele umba kwaye azange zikwazi ukunceda ukulungisa umba.
Izixhobo ze SEO - Zininzi kakhulu iinkonkxa Zixhobo ze SEO ezingagcinwanga zihlaziyiwe. Andisebenzisi nasiphi na isixhobo sokuxela ukundixelela into engalunganga- ndiyarhubuluza kwisiza, nditshone kwikhowudi, ndihlole lonke useto, ndiphonononge ukhuphiswano, emva koko ndize nemephu yendlela yokuphucula. UGoogle akanakugcina ukuKhangela iConsole ngaphambi kotshintsho lwealgorithm… yeka ukucinga ngesixhobo esithile!
Iiarhente zeSEO -Ndidiniwe ziiarhente zeSEO kunye nabacebisi. Ngapha koko, andizicwangcisi nokuba ndingumcebisi we-SEO. Ngelixa ndincedise amakhulukhulu eenkampani ngale micimbi kule minyaka idlulileyo, ndiphumelele kuba andijongi kutshintsho lwealgorithm kunye nokuqhagamshela ngasemva… ndigxile kumava abatyeleli kunye neenjongo zombutho wakho. Ukuba uzama ukudlala umdlalo we-algorithms, awuzukubetha amawaka abaphuhlisi bakaGoogle kunye namandla amakhulu ekhompyuter anayo… ndithembe. Zininzi iiarhente ze-SEO ezikhoyo ezakhelwe ngaphandle kweenkqubo eziphelelwe lixesha kunye neealgorithms zemidlalo ezingasebenziyo kuphela - ziya konakalisa ixesha lakho lokukhangela kwigunya. Naliphi na iarhente engakuqondiyo ukuthengisa kunye nesicwangciso sentengiso ayizukukunceda kwisicwangciso sakho se-SEO.
Inqaku elinye koku - ukuba uzama ukucheba iirandi ezimbalwa kwisixhobo sakho okanye kuhlahlo-lwabiwo mali lomcebisi… uyakufumana kanye le nto uyihlawulayo. Umcebisi omkhulu unokukunceda uqhube ukugcwala kwezinto eziphilayo, usete ulindelo olululo, unike iingcebiso zokuthengisa ngaphaya kwenjini yokukhangela, kwaye akuncede ufumane imbuyekezo enkulu kutyalo-mali lwakho. Ubuncwane obuncinci buya kuphazamisa amanqanaba akho kwaye uthathe imali kwaye usebenze.
Ungawonyusa njani amaBakala akho oMbane
Izibonelelo -Qinisekisa ukuba indawo yakho ayinayo nayiphi na imiba ethintela iinjini zokukhangela ekuzikhombiseni ngokufanelekileyo. Ithetha ukuba ukuphucula inkqubo yolawulo lomxholo -Ukubandakanya ifayile yeerobhothi.txt, imephu yesayithi, ukusebenza kwesiza, iithegi zetayitile, imethadatha, ubume bephepha, ukuphendula okushukumayo, njl njl. Yenzakalisa ngokungakwenzi kube lula ukukhasa, isalathiso, kunye nokubeka umxholo wakho ngokufanelekileyo.
Isicwangciso soMxholo -Uphando, umbutho, kunye nomgangatho womxholo wakho zibalulekile. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, bendihlala ndishumayela ukubuyela umva kunye nomthamo wokuvelisa amanqaku aphezulu. Ngoku ndicebisa ngokuchasene noko kwaye ndinyanzelisa ukuba abathengi bakhe i ilayibrari yomxholo loo nto ibanzi, ibandakanya imithombo yeendaba, kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ixesha elininzi otyale imali kwi yophando ngegama elingundoqo, uphando lokhuphiswano, amava, kunye nokukwazi kwabo ukufumana ulwazi abalufunayo, kokukhona umxholo wakho uya kudliwa kwaye kwabelwane ngawo. Oko kuya kuthi, kuqhube ezongezelelweyo izithuthi eziphilayo. Unokuba unayo yonke imixholo oyifunayo, kodwa ukuba ayilungiselelwanga kakuhle, usenokuzenzakalisa isikhundla sakho seinjini yokukhangela.
Isicwangciso soKwazisa -Ukwakha indawo enkulu kunye nomxholo omangalisayo akwanelanga… kuya kufuneka ubenesicwangciso esikhuthazayo esiqhuba amakhonkco abuyele kwindawo yakho yeinjini yokukhangela ukuze ubekwe phezulu. Oku kufuna ukuba uphando lubone ukuba abo bakhuphisana nabo bakleliswe njani, nokuba unganakho na ukufikelela kwezi zibonelelo, nokuba ungafumana amakhonkco kwakhona kule mimandla inegunya elikhulu kunye nabaphulaphuli abafanelekileyo.
Njengayo yonke into kwindawo yentengiso, iyehla iye ebantwini, iinkqubo, kunye namaqonga. Qiniseka ukuba usebenzisana nomcebisi wentengiso wedijithali oyiqondayo yonke imiba yokwenziwa kweinjini yokukhangela kunye nendlela enokuthi ibe nefuthe ngayo kuhambo lwabathengi bakho ngokubanzi. Kwaye, ukuba unomdla wokufumana uncedo, ndinika ezi ntlobo zeephakeji. Baqala ngentlawulo esezantsi yokugubungela uphando-ke kufuneka ube nokuzibandakanya rhoqo ngenyanga ukukunceda uqhubeke nokuphucula.
Qhagamshelana Douglas Karr
tags: ilayibrari yomxholoqhinga lomxholoUhlobo lwezinto eziphilayouphando lwezinto eziphilayoIindlela zokukhangela eziphilayoukubonakala kokhangelo lwezinto eziphilayoSEOUmcebisi we seoseo ukubonisanaUkufudukazenqanaba seozixhobo